ဂျူနို July 22, 2010 at 5:46 AM
ငစိပက်နက်ဆိုလား ရှိသေးတယ်နော်။ ငါးသလဲထိုး ပေါက်စလေးတွေလိုပဲ။ ဗိုက်ဖောက်စရာမလိုဘူးလေ။ အိုးကပ်လေးချက်။ သခွါးချဉ်ကို ငါးခူကင်နဲ့သုပ် ဝက်မလွတ်တို့ နတ်ပြည်မွှေးတို့ ခြစ်ပြီး ကြော်။ မြေလတ်ကို လွမ်းလိုက်တာ မနီရေ။ မျက်စိထဲ ဈေးကို မြင်ယောင်လာတယ်။
Htet July 22, 2010 at 7:54 AM
မြန်မာပြည်က ဈေးမနက်ခင်းလေးကို မျက်စိထဲမှာပြန်မြင်ခံစားသွားမိတယ် အမရယ်.
ပင်လယ်ငါးတွေကိုပဲစားရတိုင်း မြန်မာပြည်တုန်းကစားခဲ့ရတဲ့ ရေချိုငါးတွေကိုသတိရတယ်.
နောက် အင်ဥ...ဗူးချဉ်..သခွားချဉ်..အမရေးထားတဲ့ဈေးတန်းလေးထဲကအတိုင်း ဟင်းစားတွေရယ် ဈေးမြင်ကွင်း ဈေးပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေကိုအရမ်းသတိရတယ်.
Moe Cho Thinn July 22, 2010 at 5:31 PM
ကိုယ်တိုင် ဈေးတန်းလေးထဲ လျှောက်နေရသလိုပါပဲလား မမနီ။
ရာသီစာလေးတွေကို မြန်မာဆန်ဆန်ချက်တာ စားချင်လိုက်တာ..။
Thant July 22, 2010 at 8:45 PM
ပုံလေးကြည့်လိုက် စာလေးဖတ်လိုက် ..... ကိုယ်တိုင်ဈေးထဲရောက်သွားသလိုပဲ...... အဲဒီထမင်းဝိုင်းလေးပါ လူရှေ့ရောက်လာရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ...... :) ဈေးတွေက တကယ့်ကို အော်ပျံနေတာပဲနော်.......
:P August 27, 2010 at 1:57 AM
တနယ်ထဲပဲ အစ်မရယ်.. စားစရာတွေ အကုန်တူနေပါလား..။
ညကတောင် အိမ်ဖုန်းဆက်တော့ မမလေးကပြောတယ်၊ လယ်ငါးခူပေါက်လေးတွေ ပေါ်နေတယ်တဲ့.....။
Nay Lin September 27, 2010 at 11:40 AM